Yesu asetenam nsɛm a ɛwɔ Bible mu no, kenkan ne nyinaa ho asɛm wɔ nwoma yi mu.
BUE NE NYINAA DUM NE NYINAA
Yesu nkyerɛkyerɛ ne ne nneyɛe a ɛwɔ Nsɛmpa no mu bɛtumi asesa w’asetena.
Nsɛm a Ɛsisii Ansa na Yesu Refiri Ne Som Adwuma Ase
Wɔwoo Obi a Ɔbɛsiesie Kwan Mu
Bere a Sakaria kasaa wɔ anwonwakwan so no, ɔde nkɔmhyɛ bi a ɛho hia too dwa.
Maria Nyinsɛnee Nanso na Ɔnwaree
Bere a Maria kyerɛkyerɛɛ mu sɛ ɛnyɛ ɔbarima bi na ahyɛ no nyem, na mmom Onyankopɔn honhom na ama wanyinsɛn no, so Yosef gyee no dii?
Ɛhe na Wɔwoo Yesu na Bere Bɛn na Wɔwoo No?
Yɛyɛ dɛn hu sɛ wɔanwo Yesu wɔ December 25?
Bere a Yosef ne Maria de Yesu kɔɔ asɔrefie hɔ no, Israelfo mmienu a wɔn mfe akɔ anim hyɛɛ Yesu daakye ho nkɔm.
Nsoromma Mu Ahwɛfo Kɔsraa Yesu
Adɛn nti na nsoromma a wɔhuu wɔ Apuei no amfa wɔn ankɔ Yesu nkyɛn, na mmom ɛdii kan de wɔn kɔɔ owudifo Ɔhene Herode hɔ?
Wɔdwanee Ɔhene Tirimmɔdenfo Bi
Yesu yɛ abofra no, Mesia no ho nkɔmhyɛ mmiɛnsa bi a ɛwɔ Bible mu baa mu wɔ ne so.
Yohane Suboni Siesiee Kwan Mu
Bere a Farisifo ne Sadukifo bi baa Yohane nkyɛn no, ɔkaa wɔn anim. Adɛn ntia?
Yesu Som Adwuma no Ahyɛase
Sɔhwɛ a ɛbaa Yesu so no ma yɛhu Ɔbonsam ho nokwasɛm mmienu bi.
Yesu Fii Ase Pɛɛ Asuafo
Dɛn na ɛmaa Yesu asuafo nsia a wɔdi kan no gye dii sɛ wɔahu Mesia no?
Ɔyɛɛ Anwonwade a Ɛdi Kan
Yesu maa ne maame huu sɛ ne soro Agya na ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ no nea ɔnyɛ na ɛnyɛ ɔno.
Yɛnim sɛ Onyankopɔn Mmara maa kwan sɛ ne nkurɔfo tumi tɔ mmoa wɔ Yerusalem bɔ afɔre. Ɛnde ɛyɛɛ dɛn na Yesu bo fuu Yerusalem adwadifoɔ no saa?
Ɔkyerɛkyerɛɛ Nikodemo Anadwo
Yɛka sɛ ‘wɔasan awo obi bio’ a, dɛn na ɛkyerɛ?
Yesu Dɔree, na Yohane so Hwanee
Yohane Suboni asuafo no huu sɛ Yesu asuafo rebɔ asu no, wɔn bo annwo so, nanso Yohane deɛ, anhaw no.
Asɛnka Adwuma Kɛse a Yesu Yɛɛ wɔ Galilea
Ɔsan Yɛɛ Anwonwade Wɔ Kana
Yesu saa abofra bi yareɛ. Ɛfiri baabi a na Yesu wɔ rekɔ baabi a abofra no wɔ bɛyɛ kilomita 26.
Asɛm bɛn na Yesu kae a ɛmaa ne kuromfo yɛɛ sɛ wɔbɛkum no?
Asuafo Nnan Bi Bɛyɛɛ Nnipa Yifo
Ɔfrɛɛ wɔn sɛ wɔnnyae mpataayi na wɔmmɛyɛ nnipa yifo.
Yesu Yɛɛ Anwonwade Akɛse wɔ Kapernaum
Bere a Yesu tuu ahonhommɔne no, wamma wɔn kwan amma wɔanka sɛ ɔno Yesu nyɛ Onyankopɔn Ba. Adɛn nti na Yesu yɛɛ saa?
Ɔyɛɛ Adwuma Wɔ Galilea Nkuro Pii Mu
Nkurɔfo baa Yesu hɔ ma ɔsaa wɔn yareɛ, nanso ɔkyerɛɛ sɛ ɛnyɛ ayaresa nti na ɔbae.
Ɔde Ayamhyehye Saa Kwatani Bi Yareɛ
Asɛm tiawa bi Yesu kae no ma yɛhu sɛ ɔdwene wɔn a ɔsaa wɔn yareɛ no ho paa.
Adɛn nti na Yesu ne abɔnefo didii?
Adɛn Nti Na Yesu Asuafo No Anni Mmuada?
Yesu de nsã kotokuo yɛɛ mfataho de kyerɛkyerɛɛ mu.
Enti Obi Bɛtumi Ayɛ Adepa Homeda?
Dɛn na ɛmaa Yudafo no tuu wɔn ani sii Yesu so sɛ wasa obi a wayare mfe 38 yareɛ?
Ɛyɛɛ Yudafo no adwene sɛ Yesu reyɛ ne ho sɛ ɔne Onyankopɔn yɛ pɛ, nanso Yesu kaa sɛ Onyankopɔn yɛ kɛse sen no.
Adɛn nti na Yesu se ɔyɛ “Homeda Wura”?
Dɛn na na Mmara Ma Ho Kwan Homeda?
Na Sadukifo ne Farisifo nka koraa, ɛha yi deɛ wɔyɛɛ baako tiaa Yesu.
Ɔmaa Yesaia Nkɔmhyɛ Baa Mu
Wɔn a Yesu saa wɔn yare no, adɛn nti ɔkaa kyerɛɛ wɔn sɛ mmma wɔnka nea wayɛ no ne onipa ko a ɔyɛ nkyerɛ obiara?
Yesu Yii Asomafo Dumienu
Nsonsonoe bɛn na ɛwɔ ɔsomafo ne ɔsuani ntam?
Bepɔ So Asɛnka A Agye Din
Nya nsɛntitiriw a na ɛwɔ Yesu asɛnka no mu nkyerɛkyerɛmu.
Dɛn na ɔsraani panyin yi yɛe a ɛyɛɛ Yesu nwonwa?
Wɔn a wɔhuu anwonwade no huu sɛ ɛkyerɛ biribi.
Yohane Pɛe Sɛ Ɔte Yesu Anom Asɛm
Dɛn nti na Yohane soma kɔbisaa sɛ Yesu ne Mesia no anaa? So na Yohane adwenem yɛ no naa?
Awo Ntoatoaso Asoɔdenfo Nnue
Yesu kaa sɛ Atemmu Da no, ɛbɛyɛ mmerɛ ama Sodom asene Kapernaum. Kapernaum na na Yesu taa soɛ.
Bɔne Fafiri Ho Mfatoho
Yesu kaa sɛ wɔde ɔbaa bi a ebia ɔyɛ oguamanfo bɔne afiri no. Ɛno kyerɛ sɛ ɛnyɛ mfomso sɛ yɛbɛto Onyankopɔn mmara anaa?
Yesu Kaa Farisifo No Anim
Dɛn ne “odiyifoɔ Yona sɛnkyerɛnne no”?
Ahenni No Ho Mfatoho
Yesu de mfatoho nwɔtwe na ɛkyerɛkyerɛɛ ɔsoro Ahenni no mu.
Bere a Yesu maa mframa ne ahum yɛɛ dinn no, ɔma yɛhuu sɛnea asetena bɛyɛ ankasa wɔ n’Ahenni nniso ase.
So ahonhommɔne bebree bɛtumi ahyɛ onipa baako so?
Ɛnyɛ Yesu nkyerɛkyerɛ ne n’anwonwade no na ɛmaa nnipa a ɛwɔ Nasaret no poo no, na mmom biribi foforo ntia.
Asɛm ‘Ɔsoro ahennie no abɛn’ no kyerɛɛ dɛn ankasa?
Yesu kaa kyerɛɛ asomafo no sɛ mma wonnsuro sɛ wɔbɛkum wɔn. Sɛ saa a, dɛn nti na ɔkaa sɛ wonnwane nkɔ baabi foforo?
Wɔkuu Obi Wɔ Awodadi Bi Ase
Salome asaw no maa Herode ani gyei, enti ɔkaa ntam sɛ biribiara a ɔpɛ biara ɔde bɛma no. Ade a ɛyɛ hu bɛn na obisae?
Ɔde Paanoo ne Mpataa Kakraa Bi Maa Mpempem Dii
Anwonwade a Yesu yɛe yi, sɛnea ɛka koma nti Nsɛmpa nnan no nyinaa kaa ho asɛm.
Bere a asomafo no huu sɛ Yesu anante po so na wama mframa ayɛ dinn no, dɛn na wɔsua fii mu?
Nkurɔfo twaa kwan kɔhwehwɛɛ Yesu, nanso ɔkasa tiaa wɔn. Adɛn ntia?
Yesu Asɛm no Yɛɛ Nnipa Pii Nwonwa
Yesu nkyerɛkyerɛ bi maa nkurɔfo ho dwirii wɔn, na ɛmaa n’asuafo bebree gyaee n’akyi di.
Dɛn Paa na Ɛgu Onipa Ho Fi?
Nea ɛkɔ n’anom anaa nea ɛfiri ne mu ba?
Ɔmaa Nnipa Pii Paanoo na Ɔbɔɔ Asuafo no Kɔkɔ
Ɛduu baabi no, Yesu asuafo no huu mmɔreka a ɔreka ho asɛm no.
Dɛn ne Ahenni nsafoa no? Hwan na ɔde yɛɛ adwuma, na ɔde yɛɛ adwuma sɛn?
Ahosakra no Yɛ Kristo Anuonyam Ho Mpopoe
Dɛn ne ahosakra no? Dɛn na na ɛkyerɛ?
Yesu Tuu Ahonhommɔne Fii Abarimaa Bi So
Yesu kaa sɛ ahonhommɔne a wɔantumi antu no kyerɛ sɛ wɔn gyidi sua. Hwannom na na Yesu reka sɛ wɔn gyidi sua no? Ɛyɛ abarimaa no, ne papa, anaa Yesu asuafo no?
Ahobrɛase Ho Asuade Kɛse
Mmarima mpanimfoɔ bi suaa biribi fii abofra kumaa hɔ.
Yesu Afotu a Ɛfa Hintidua ne Bɔne Ho
Ɔkyerɛɛ akwan mmiɛnsa a yɛbɛfa so asiesie nsɛmnsɛm a ɛsɔre wɔ anuanom ntam.
Yesu de akoa tirimɔdenfo mfatoho no kyerɛɛ sɛ bɔne fafiri ho hia Onyankopɔn paa.
Ɔrekɔ Yerusalem no, Ɔkyerɛkyerɛɛ Nkurɔfo
Yesu ne nnipa mmiɛnsa bi bɔɔ nkɔmmɔ kyerɛɛ wɔn nneɛma a obi yɛ a, ɛremma ɔntumi nni n’akyi.
Asɛnka Adwuma a Akyiri Yi Yesu Yɛɛ Wɔ Yudea
Ɔkɔɔ Asese Afahyɛ no Ase Wɔ Yerusalem
Dɛn na ebia ɛmaa wɔn a wɔretie Yesu no nyaa adwene sɛ ɔwɔ ahonhommɔne?
“Obiara Nkasaa Saa Da”
Ɛkame ayɛ sɛ Yudafo Sanhedrin mufo nyinaa kasa tiaa Yesu, nanso wɔn mu baako nyaa akokoduru kaa bi maa no.
Onyankopɔn Ba no Yɛ “Wiase Hann”
Yesu kaa sɛ “nokorɛ no bɛma moade mo ho.” Wɔbɛde wɔn ho afiri dɛn ho?
Yesu kyerɛkyerɛɛ nkurɔfo nea ɛma yɛhu Abraham mma, na ɔkyerɛɛ wɔn nea ɔyɛ n’Agya nso.
Yesu Somaa Asuafo 70 sɛ Wɔnkɔka Asɛmpa
Yesu wɔ Yudea no, ɔyii asuafo 70 kyekyɛɛ wɔn mu mmienu mmienu somaa sɛ wɔnkɔka Ahenni no ho asɛm. Ɛhe na Yesu kaa sɛ asuafo no nkɔka asɛm no​—hyiadan mu anaa nkurɔfo afie mu?
Samariani Bi Kyerɛɛ sɛ Ɔyɛ Yɔnko Pa
Samarini yɔnko pa mfatoho no, dɛn na Yesu kae a ɛma yɛnya asuade kɛse fi mu?
Ahɔhoyɛ ne Mpaebɔ Ho Nkyerɛkyerɛ
Yesu kɔsraa Maria ne Mata wɔ wɔn fie. Ahɔhoyɛ ho ade bɛn na ɔkyerɛɛ wɔn? Akyiri yi, dɛn na ɔkyerɛɛ n’asuafo no sɛ wɔrebɔ mpae a, wɔmmisa?
Yesu Kyerɛɛ Nea Ɛde Anigye Ba
Yesu kaa “Onyankopɔn nsateaa” ho asɛm kyerɛɛ n’atamfo, na ɔkyerɛɛ wɔn sɛnea Onyankopɔn ahenni anya ato wɔn. Afei ɔmaa nkurɔfo huu nea ɛbɛma wɔanya anigye ankasa.
Ɔne Farisini Bi Didii
Yesu maa nkurɔfo huu sɛ Farisifo ne akyerɛwfo no yɛ nyaatwom. Nnesoa bɛn na wɔmaa nkurɔfo no soae?
Yesu De Ahonyade Ho Afotu Maa Nkurɔfo
Yesu maa mfatoho bi sɛ ɔbarima bi sii asan akɛse. Afotu bɛn na Yesu tĩĩ mu kae a ɛma yɛhu sɛ, sɛ yɛdi ahonyade akyi a, asɛm bɛtumi ato yɛn?
Efiehwɛfoɔ Nokwafoɔ, Siesie Wo Ho!
Yesu kyerɛɛ sɛ adamfofa a ɛda n’asuafo ne Onyankopɔn ntam no hia no paa. Adwuma bɛn na efiehwɛfoɔ nokwafoɔ no bɛyɛ ama wɔn honhom fam aduane adi? Afotu a wɔde maa wɔn sɛ wɔnsiesie wɔn ho no, adɛn nti na ɛho hia?
Nea Enti a Ɔsɛe Da Hɔ Retwɛn Wɔn
Yesu kaa sɛ wɔn a ɔreboa wɔn no, sɛ wɔansakra a, ɔsɛe da hɔ retwɛn wɔn. Nea Yesu reyɛ de aboa wɔn ama wɔne Onyankopɔn ntam ayɛ papa no, na wɔbɛsua biribi afiri mu anaa?
Odwanhwɛfoɔ Pa No ne Nnwammuo No
Sɛnea odwanhwɛfoɔ hwɛ ne nnwan no, ma yɛhu sɛnea Yesu nso ani ku ne n’asuafo no ho. Wɔbɛtie ne nkyerɛkyerɛ na wɔadi n’akyi anaa?
Ɔne Agya No Yɛ Baako Nso Ɔnyɛ Onyankopɔn
Yesu atamfo binom bɔɔ no sobo sɛ ɔyɛ ne ho sɛ ɔne Onyankopɔn yɛ pɛ. Nyansakwan bɛn na ɔfaa so bɔɔ wɔn asɛm no gui?
Asɛnka Adwuma a Akyiri Yi Yesu Yɛɛ Wɔ Yordan Nifa So
Yesu kyerɛkyerɛɛ n’atiefo no maa wɔhuu nea ɛsɛ sɛ obi yɛ na wanya nkwa, na ɔmaa wɔhuu nea enti ebinom rentumi nyɛ saa. Saa bere no, na n’afotu no ho hia paa. Ɛnnɛ nso ɛ?
Sɛ Onyankopɔn To Pono a, Hwannom na Ɔfrɛ Wɔn?
Bere bi a Yesu redidi wɔ Farisini bi fie no, ɔmaa mfatoho bi, na na ɛfa apontow kɛse bi ho. Asuade a ɛho hia ma Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa wɔ n’asɛm no mu. Asuade bɛn?
Sɛ obi ka sɛ ɔyɛ Kristo suani a, ɛnyɛ agorɔ. Yesu maa yɛhuu nea obi bɛyɛ ne suani a, ɛda hɔ retwɛn no. Nea ɔkae no, ɛbɛyɛ sɛ ɛmaa ebinom a afei na na wɔpɛ sɛ wɔbɛdi n’akyi no ho dwirii wɔn.
Ɔbɔnefo Sakra a Ɛde Anigye Ba
Akyerɛwfo ne Farisifo no kasa tiaa Yesu sɛ ɔne ɔmanfo bɔ. Yesu maa mfatoho de kyerɛɛ sɛnea Onyankopɔn bu abɔnefo.
Ɔba a Ɔyerae no San Bae
Ɔba hohwini mfatoho a Yesu mae no, dɛn na yɛbɛtumi asua afiri mu?
Fa Wo Ho Adwene na Yɛ Nhyehyɛe Pa
Yesu de efiehwɛfoɔ daadaafo bi a ɔnka nokware yɛɛ mfatoho de kyerɛɛ nokwasɛm bi.
Nsakrae Baa Ɔdefo no ne Lasaro Asetenam
Sɛ wobɛtumi ate Yesu mfatoho yi ase a, gye sɛ woahu wɔn a ɔdefo no ne Lasaro gyina hɔ ma wɔn.
Yesu maa yɛhuu su bi a ɛbɛtumi aboa yɛn na sɛ obi yɛ yɛn bɔne mpɛn pii mpo a, yɛatumi de akyɛ no.
“Owusɔreɛ ne Nkwa”
Bere a Yesu kaa sɛ wɔn a wɔnya ne mu gyidi no “renwu da” no, na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn?
Anwonwade a Yesu yɛe yi, nnɛama mmienu bi wom a, Yesu atamfo no mpo antumi annye ho akyinnye.
Yesu mfatoho a ɛfa ɔtemmufo a ɔntene ne okunafo ho no, ɔsii su bi a ɛho hia so dua.
Awaregyae ne Mmofra Ho Dɔ
Sɛnea na Yesu asuafo bu mmofra no, ɛnyɛ saa koraa na na Yesu bu mmofra. Adɛn ntia?
Yesu ne Ɔdefo Bi Nkɔmmɔ
Dɛn na ɛmaa Yesu kaa sɛ ɛyɛ mmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ aniwa mu sen sɛ ɔdefo bɛkɔ Onyankopɔn Ahenni mu?
Bobeturo Mu Adwumayɛfo Ho Mfatoho
Ɛbɛyɛ dɛn na adikanfo aka akyi na akyikafo abɛdi kan?
Yakobo ne Yohane srɛɛ Yesu sɛ ɔmma wɔn dibea kɛse wɔ Ahenni no mu, nanso ɛnyɛ wɔn nko ara na na wɔpɛ saa hokwan no.
Bible ka sɛ Yesu saa onifuraefo bi yareɛ wɔ Yeriko baabi. Adɛn nti na wobɛka sɛ nea ɛsono sɛnea Nsɛmpa no biara kaa ho asɛm?
Yesu kaa sɛ: “Obiara a ɔwɔ bie no, wɔbɛma no bi aka ho; na deɛ ɔnni bie no, deɛ ɔwɔ mpo wɔbɛgye afiri ne nsam.” Ɛno kyerɛ sɛn?
Yesu Asɛnka Adwuma a Ɛtwa To
Yesu Kɔɔ Betania Kɔdidii Simon Fie
Lasaro nuabaa Maria yɛɛ biribi a anyɛ nkurɔfo dɛ, enti wɔkasakasaa ho, nanso Yesu kaa bi maa no.
Ɔmaa nkɔmhyɛ bi baa mu; wɔhyɛɛ saa nkɔm no, na adi mfe ahanum.
Wohwɛ a wobɛka sɛ nneɛma a adwadifoɔ no tɔn wɔ asɔrefie hɔ no, na asɛm biara nni ho, nanso adɛn na Yesu frɛɛ wɔn adwotwafoɔ?
Sɛ obi ka sɛ ɔgye Yesu di a, ɛkyerɛ sɛn? Dɛn na ɔbɛyɛ de akyerɛ sɛ ampa ɔgye no di?
Ɔde Borɔdɔma Dua Yɛɛ Gyidi Ho Adesuade
Yesu kyerɛkyerɛɛ asuafo no maa wɔhuu sɛ gyidi tumi yɛ nneɛma pii, na ɔkyerɛɛ wɔn nea enti Onyankopɔn ne Israel man twaa abusua mu.
Kenkan na hu nea Yesu mfatoho mmienu bi kyerɛ. Nea ɛdi kan, agya bi somaa ne mma sɛ wɔnkɔ ne bobeturo mu nkɔyɛ adwuma. Nea ɛtɔ so mmienu, bobeturo wura bi de ne bobeturo gyaa akuafo bi sɛ wɔnyɛ mu adwuma, nanso na wɔyɛ nnipa bɔne.
Ɔhene Bi Frɛɛ Nkurɔfo Baa Ayeforohyia Ase
Yesu mfatoho no yɛ nkɔmhyɛ.
Wɔyɛɛ sɛ Wɔbɛma Yesu Ho Akyere no Nso Anyɛ Yie
Ɔmaa Farisifo no kaa wɔn ano toom, na akyiri yi ɔmaa Sadukifo nso nsɛm kaa wɔn tirim. Bere a atamfo kaa wɔn ntoma bɔɔ ano na wɔbae no, wɔantumi no.
Ɔbɔɔ Nyamesom Mpanimfoɔ no Akyi
Adɛn nti na Yesu ampene so sɛ ɔsom ahorow nyinaa yɛ?
Da a Ɛtwa To a Yesu Kɔɔ Asɔrefie Hɔ
Yesu de nea okunafo hiani no yɛe no yɛɛ asuade kɛse.
Ne nkɔmhyɛ no bi baa mu asomafo no bere so. Nea aka no nyinaa bɛba mu wɔ wiase nyinaa anaa?
Mmaabun Mfatoho no Ho Adesuade
Yesu mfatoho no, ɛkyerɛ sɛ n’asuafo no, na emu fã yɛ nkwaseafo na fã yɛ anyansafo anaa?
Adesuade a Ɛwɔ Dwetikɛseɛ Mfatoho no Mu
Yesu mfatoho no kyerɛ asɛm a ɛdi so yi mu: “Obiara a ɔwɔ bie no, wɔbɛma no bi aka.”
Kristo Bɛbu Nnwan ne Mmirekyie Atɛn
Yesu de mfatoho a ɛka koma kyerɛkyerɛ nea wɔbɛgyina so abu atɛn daakye; atemmu a obiara bɛnya no bɛtena hɔ daa.
Twam Afahyɛ a Yesu Dii a na Ɔrenni Bio
Nyamesom mpanimfoɔ no penee so sɛ wɔbɛma Yuda nnwetɛbona 30 na wayi Yesu ama wɔn. Dɛn na na na wɔtɔn gye saa boɔ no?
Ɔkyerɛɛ Asomafo no Ahobrɛase Wɔ Twam no Ase
Ɔyɛɛ adwuma a nkoa na ɛsɛ sɛ wɔyɛ maa asomafo no ho dwirii wɔn.
Wɔgyee Nea Ɔyɛ Wɔn Mu Kɛse Ho Akyinnye
Yesu kyerɛɛ Asomafo no ahobrɛase ho ade saa anwummere no, nanso ankyɛ koraa na wɔn werɛ fii.
Yesu kyerɛɛ asomafo no ɛkwan paa a wɔbɛtumi afa so akɔ Onyankopɔn nkyɛn.
Dua Nkorabata a Ɛso Aba ne Yesu Nnamfo
Ɛkwan bɛn so na Yesu asuafo ‘so aba’?
“Momma Mo Bo Ntɔ Mo Yam! Madi Wiase So Nkonim”
Ɛbɛyɛ dɛn na Yesu adi wiase no so nkonim bere a wiase no kum no?
Yesu Mpae a Ɔde Wiee Afahyɛ No
Ɔmaa wɔhuu sɛ wayɛ ade kɛse bi a ɛkyɛn daa nkwa a ɔbɛma nnipa anya koraa.
Ɔde Awerɛhoɔ Bɔɔ Mpae
Adɛn nti na Yesu bɔɔ mpae sɛ: “Yi kuruwa yi firi me so”? Ná ɔmpɛ sɛ ɔbɛwu de ne nkwa abɔ afɔre ama nnipa bio anaa?
Yuda Yii Kristo Mae na Wɔkyeree no Kɔe
Ná ɛyɛ dasuom, nanso Yuda tumi huu Yesu.
Wɔde Yesu Kɔɔ Anas Hɔ San De no Kɔɔ Kaiafa Hɔ
Sɛnea wɔdii Yesu asɛm no ma yɛhu sɛ wɔbuu no atɛnkyea.
Ɔsomafo Petro Kaa wɔ Kaiafa Fie sɛ Ɔnnim Yesu
Ná Petro yɛ obi a ɔwɔ gyidi na ɔmfa ne som nni agorɔ. Ɛnde ɛyɛɛ dɛn na ɔno ampa ara, ɔtumi kaa sɛ ɔne Yesu nni hwee yɛ?
Sanhedrin no Dii N’asɛm De no Kɔmaa Pilato
Afei Yudafo nyamesom mpanimfoɔ no kaa biribi a ɛma yɛhu nea na ɛwɔ wɔn komam paa.
Adɛn nti na Pilato de Yesu kɔmaa Herode sɛ ɔnni n’asɛm? Ná Pilato nni tumi sɛ ɔdi Yesu asɛm anaa?
Pilato Kaa Sɛ: “Hwɛ! Onipa no Nie!”
Suban pa a Yesu daa no adi no yɛɛ Pilato mpo fɛ.
Ɔde Yesu Maa Wɔn sɛ Wɔnkɔkum No
Mmaa a na wɔdi Yesu akyi resu no, adɛn nti na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnsu mma wɔn ho ne wɔn mma?
Ɔhene a Ɔnyɛɛ Bɔne Biara Huu Amane wɔ Dua So
Abɔnefo a na wɔsɛn Yesu nkyɛn no, Yesu hyɛɛ ɔbaako bɔ, na na ɛnyɛ bɔhyɛ ketewa.
“Ampa Ara, Onipa Yi Yɛ Onyankopɔn Ba”
Esum a ɛduruu asase so awia ketee, asase a ɛwosoe ne asɔrefie hɔ ntwamutam no a emu suan mmienu no, ne nyinaa kɔsi asɛm baako so.
Adɛn nti na na ɛsɛ sɛ wɔsie Yesu ansa na awia akɔtɔ?
Wɔanhu Amu no, Efisɛ na Yesu Anyane!
Yesu nyanee no, ɛnyɛ asomafo no na ɔdii kan yii ne ho adi kyerɛɛ wɔn; mmom ɔyii ne ho adi kyerɛɛ n’asuafo mmaa no baako.
Yesu bisaa Petro asɛm bi mprɛnsa maa ɔhuu nea ɔyɛ a, ɛbɛkyerɛ sɛ ɔdɔ Yesu.
Bere a Yesu retwɛn wɔ soro akɔsi sɛ ɔbɛkɔ akɔdi n’atamfo so nkonim no, dɛn na ɔyɛe?
Adwuma pii wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ Yesu yɛ ansa na ɔde Ahenni no ama ne Nyankopɔn ne n’Agya.
Su ahorow nnwɔtwe bi wɔ hɔ a Yesu wɔ asase so no, ɔdaa no adi wɔ ne biribiara mu.
Nsɛmpa nnan no, sɛ wopɛ sɛ wohu nwoma yi mu baabi pɔtee a wɔaka ne fã bi ho asɛm a, hwɛ Bible mu nsɛm a yɛahyehyɛ yi.
Yɛakyerɛ eti a mfatoho no biara wɔ wɔ nwoma yi mu.
Bible nkɔmhyɛ a ɛkyerɛ sɛ Yesu ne Mesia no, fa toto nsɛm a ɛsisii n’asetenam no ho. Afei kenkan ɛho asɛm wɔ nwoma yi mu hwɛ.
Map yi kyerɛ mmeae a Yesu ne n’asɛnka adwuma no.
Share Share Yesu Ne Ɛkwan no, Nokorɛ no ne Nkwa